McDonald's na-enye ihe nlere anya ya na nri ya obi ụtọ | Akụkọ akụrụngwa
McDonald bụ otu n'ime usoro nri ngwa ngwa a kacha mara amara na nke ewu ewu n'ụwa niile, na-eguzo maka ogo nri ya, kamakwa maka menu ụmụ ya, nke gụnyere onyinye dị egwu. Otú ọ dị, na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya ụlọ ọrụ ahụ ahapụla iwu ya nke inye ụmụaka ihe egwuregwu, iji nye onye nlekota oru na United States na Canada.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ n ’onyonyo nke na-eche isiokwu a, ọ bụ a obere egwuregwu smartwatch, a na-akpọ Nzọụkwụ-Ọ nke ya na ngwa nri ngwa ngwa choro ka onye kacha nta n'ime ulo kwaga ma nọgide na-arụsi ọrụ ike.
Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke a na smart smart nke anyị na-ekwukarị maka ebe a. Ihuenyo ga-egosi ihe atụ usoro emere na ụfọdụ obere LEDs ga-enwu gbaa dị elu ma ọ bụ obere ọsọ, na-enwu ọkụ na elu ma ọ bụ obere ọsọ ka ụmụaka wee nwee ike ịhụ ọkụ dị iche iche dabere na ogo ọrụ ha.
Dịka anyị gwara gị n'oge a Themụntakịrị nọ na United States na Canada na-anata onyinye a ya na Olympic Games a na-eme na Rio de Janeiro dabara. N'oge a amaghi ma oru nlekota oru a gha erute otutu mba, obu ezie na anyi nwere olile anya ya ebe obu na onyinye kariri.
Kedu ihe ị chere maka onyinye kachasị ọhụrụ nke McDonald's kpebiri itinye na nri a Happyụrị na-ewu ewu?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » McDonald's na-enye nri nleba anya ya na Nri Obi .tọ ya